1. Tsy misy feo avy amin'ny lafiny iray / unilateral headphone nefa tsy misy feo
1. Avereno azafady raha fantsona unilateral ny mozikanao.
1. Raha mifandray amin'ny solosaina izy dia alao ny feo toe-javatra ary jereo raha toa ka mody mono out.
2. Miezaha milalao hira samihafa miaraka amin'ny mozika mahazatra mahazatra.
3. Miezaha milalao mozika mitovy amin'ny headphone hafa.
2. Azafady azo antoka fa voatsindrina tsara ny tariby audio.
3. Manadio ny vovoka na maloto amin'ny plug.
2. Ny feo mandeha amin'ny herinaratra, feo na tabataba
1. Hamarino fa tsara ny tariby fanamafisam-peo ary ampidirina tsara.
2. Manadio ny vovoka na maloto amin'ny plug.
3. Atsofohy matetika kokoa, andramana ny tariby na ny tariby hafa izay mifanaraka amin'ny headphone. Raha tsara ny iray amin'ireo tariby dia manaporofo izany fa tsy misy olana amin'ny mpikapoka headphone. Mety mila tariby vaovao ianao.
3. Mihena ny boky raha mifandray amina loharanom-peo marobe amin'ny endrika tariby
Raha mifandray amin'ny tariby 2 miaraka amin'ny telefaona ny headphone, dia mihamaintaka ny kitra ankehitriny satria mihetsika amin'ny tariby roa izany. Miangavy famelabelarana.
4. Ahoana ny fomba hamadihana ny kaopy amin'ny kavina?
Azafady atao azafady raha toa ka mpitari-dalana sy mpampiasa ary avereno ny kaopy amin'ny sofina ho làlana marina.
Nandalo fitsapana kalitao henjana ny vokarintsika, na izany aza, ny vokatra elektronika dia tsy mety simba. Aza mampiasa hery mahery vaika mandritra ny fampiasana.
6. tsy tokony hitafy
Noho ny toetra mivaingana, ny headphone an-tsofina amin'ny sofina rehetra dia mety hiteraka fahatsapana tsy mahazo aina rehefa avy niakanjo lava. Mampiasa landihazo sofina malefaka avo lenta amin'ny fahazoana antoka izahay. Manoro hevitra anao ihany koa izahay hanala ny fonon-dohan-dronononao ary maka sasatra aorian'ny fitafianao azy mandritra ny adiny iray mahery isan'andro.
7. Tsy misy feo na feo sasany avy amin'ny mikrô
1. Tsindrio ny bokotra moana amin'ny "ON".
2. Aza avadika amin'ny faran'izay kely ny volan'ny fanaraha-maso lavitra fa raha tsy izany dia tsy hiasa ny mikrô.
3. Azafady alaivo aorina fa feno tsara ilay tariby ary mipetaka tanteraka.
4. Azafady esory ny mikrô amin'ny marika hafa amin'ny firaketana fandraketana ny feo (mety amin'ny solosaina)
8. HEADPHONE / MIKA-MIKA ARY MBOLA TONY
Ny fantsom-pahefana amin'ny fanaraha-maso ny volan'ny fanaraha-maso lavitra dia mahaleo tena. Ny lakile fanitsiana ny boky dia tsy miaraka amin'ny finday, solosaina na fitaovana hafa. Azafady amboary tsotra ny finday, solosaina na fitaovana hafa.
9.TOMPOANA TSY MAINTSY HITOMPOANA miaraka amin'ny fahitalavitra sy ny hafa
1.Alohan'ny tsapanao fitaovana, alao antoka fa tsy mandeha amin'ny fitaovana hafa ny headset. Raha ny tselatra dia tselatra miaraka amin'ny mena sy ny manga, izany hoe modely amin'ny bluetooth ny headphone.
2.Mandehana manadio ny tantaran'ny Bluetooth amin'ny fitaovanao ary hikaroka indray ny vokatra vokarintsika.
3.Ny headphone manana fitaovana fitoviana be dia be. Raha toa ka tsy mifanentana ireo fitaovana manokana, azafady mifandraisa amin'ny fanohanan'ny mpanjifa.
10. NY FAHAFATESANA ARY ANY amin'ny modely BLUETOOTH
Rehefa milalao mozika dia tsy ho vita ny fiasan'ny fitaovana sasany miaraka amin'ny fiasan'ny Bluetooth. Mila manitsy ny volan'ny fitaovana ianao.
11. NY TONTOLO FIVORIANA / FIVORIANA ENTANA
1. Noho ny toetoetran'ny fambara Bluetooth, dia mety hanelingelina ny tontolo iainana ny famantarana ny Bluetooth. Azafady manandrana manova ny toeranao ara-jeografika, ary esory ny fonony matevina, lafaoro microwave, vavahadin'ny tapakila, fitaovana Bluetooth hafa na toerana mamokatra onjam-pifandraisana elektronika.
2. Ny fanelingelenana famantarana dia mety hitranga rehefa ampiasaina ny fitaovana WI-Fi® akaikin'ny vondrona raha toa ka samy mampiasa ilay fitaovana misy ifandraisany 2.4 GHz na mampiasa 5.0 GHz Wi-Fi. frequency band. Manandrama mamono ny fiasa WI-Fi fitaovana fampifandraisana na mampiasa 5.0 GHz WIFI
12. FIVORIANA MISY FAHAFATESANA / BATISA TSY HISY AZY HITADIDINA
1. Azafady ampiasao ny charger eto ambany 5V mba hanefena ny headphone.
2. Mena ny jiro ho an'ny mpanondro mandritra ny fiampangana. Rehefa feno ilay izy dia ho manga ny tondro.